u-Burns uhola i-England ezama ukujaha umphumela oyirekhodi
u-Rory Burns no-Dominic Sibley bayiqalise kahle i-England njengoba bezimisele ngokujaha umphumela oyirekhodi ukuze banqobe osukwini lesithathu lomdlalo wokuqala we-Test bedlala nama-Standard Bank Proteas e-SuperSport Park e-Centurion ngoMgqibelo.
Izivakashi zibekelwe umphumela wama-runs awu-376 – ama-runs amaningi ajahwa aficwa nge-innings yesine kwaba u-251 i-England ngo-2000 – njengoba abashayayo bebengaphezulu kuma-session okokuqala kulomdlalo kuphume izinti ezintathu kuma-sessions amabili okuqala neyodwa kweyokugcina. Lokhu kuqhathaniswe ngezinti eziyisishagalolunye ezaphuma osukwini lokuqala nezinti eziwu-15 osukwini lesibili.
Ngenxa yalokho ama-Proteas ebengaphezulu kwi-session yasekuseni, ashaya u-125 kuphume izinti ezintathu ngama-runs adlulile kwamahlanu nge-over. Lokhu kungenxa ye-career best innings yama-runs awu-51 eyenziwe umdlali obedlala umdlalo wakhe wokuqala u-Rassie van der Dussen (67 balls, 5 fours) ne-nightwatchman u-Anrich Nortje (40 off 89 balls, 6 fours).
Ama-seamers e-England ahlasele u-Nortje ngamabhola amafushane futhi kwathatha isikhathi eside ukuthi kusebenze lokho njengoba kunezezelwe ngama-runs awu-91 ngenti yesihlanu.
Kuphinde kwaba nama-runs awu-95 ashaywe ngezinti zokugcina ezintathu kuhola u-Vernon Philander oqhubekile nomsebenzi oyi-all-round ngaphambi kokuthi abe owokugcina ophumayo (46 off 68 balls, 4 fours).
Ushwibe kahle u-Jofra Archer ngokukhipha izinti ezinhlanu okwesithathu kumdlalo wakhe wesikhombisa we-Test (5/102 kuma-overs awu-17).
u-Burns, ophunyuke enama-runs awu-20, no-Sibley, bayiqalise kahle i-England ngenhlanganiso yabo yama-runs awu-92 kuma-overs awu-28 ngaphambi kokuthi u-Sibley aphindisele ibhola ku-Keshav Maharaj.
i-left-arm spinner siqale ukuthola i-turn ukunezezela ngokuhlasela kwabashwiba kuma-Proteas.
u-Burns uqhubeke waze wathola u-50 (owesithupha kwimidlalo ewu-15) futhi waqeda usuku ku-77 (117 balls, 11 fours) nokho usindile ngebhola elingaphambi kwelokugcina osukwini ethola i-edge kushwiba u-Maharaj ladlula u-Faf du Plessis kwi-slip.
i-spinner siqede usuku no-1/16 kuma-overs awu-10 futhi kuyacaca ukuthi kumele sidlale indima enkulu osukwini lesine.
i-England iqede ku-121/1 idinga ama-runs awu-255 ukuze inqobe.
u-Markram ukhishiwe kwimidlalo esele kwi-England Test series u-Boucher ugculisekile ngenqubekelo phambili yama-Proteas u-Jacques Kallis umenyezelwe njengomeluleki wokushaya kuma-Proteas Bayisithupha abadlali abasha ababalwe kwiqembu lama-Proteas lama-Test India wrap up series to claim 120 Test match points u-Hamza uletha ukukhanya ekushayeni kwama-Proteas u-Linde uzothatha indawo ka-Maharaj kumdlalo we-Test wokugcina Inkani ka-Maharaj no-Philander ibambezela ukunqoba kweNdiya u-Kohli uhole usuku lamarekhodi aphuliwe kwi-India ngokushaya u-Sharma uhlela isimo ngamakhulu alandelanayo u-Elgar no-De Kock bashaye amakhulu okuqala kuma-Test e-India osukwini ama-Proteas engaphezulu